Wararka Maanta: Talaado, Jun 11, 2013-Maamullada Somaliland iyo Khaatumo State oo la kala Wareegay Maxaabiis iyo Gaadiid ay Muddo kala haysteen (SAWIRRO)
Lix maxbuus iyo gaari kuwa iska-rogaha ah oo maamulka Somaliland ay ku qabsadeen dagaal ay la galeen maamulka Khaatumo 22/Jan/2013 ayaa odayaal ka yimi dhinaca magaalada Burco soo gaarsiiyeen magaalada Xuddun halka odayaal ka yimid dhinaca maamulka Khaatumana ay keeneen laba gaari oo nooca xamuulka qaada ah iyo sadex nin.
Kala wareegidda labada dhinaca ayaa loo diiday inay saxaafadu goobjoog ka ahaato oo ay sawirro ka qaataan maxaabiista, balse waxaa jiray wadahadal muddo dheer qaatay oo labada dhinac ay ku muran sanaayeen gaadiidka lala kala wareegaayay oo aan dhameyn.
Oday ka mid ahaa kuwa deeganka Xuddun, Muuse Xasan oo goobta joogy ayaa sheegay inay laba gaari ku maqan yihiin dhinaca Somaliland halka dhinaca maamulka Khaatumana hal gaari aan goobta la keenin.
Makhribkii shalay ayaa labada dhinaca u kala boqooleen deegaanadii ay ka yimaadeen, wararka saxaafadda soo gaaraya ayaa sheegaya inay labada dhinac heshiiyeen, balse waxaa jirta in odayaashii ka socdey Somaliland ay ka tageen gaari, taasoo muujinaysa inay weli tabasho jirto.
Dadka taabacsan maamulka Khaatumo ayaa laga soo bilaabo bishii koowaad ee sanadka ugaadhsi xoogan ku hayay gaadiidka isaga gooshaya Waqooyi Soomaaliya iyo marsada Boosaaso, kuwaasoo cudurdaar uga dhigaya dagaal labada maamul dhex-maray inay dad rayid ah iyo gaadiid uga kaxaysteen tuulada Gorofley oo 20-km bari kaga beegan Xuddun.
Waa markii ugu horeysey ee labada maamul Somaliland iyo Khaatumo wax is dhaafsadaan, waxaadse moodaa in labad dhinacba ay doonayeen in si hoose loo dhameeyo arrinta, taasoo ay muujinayso qaabka ay maxaabiista iyo gaadiidka ula kala wareegeen odayaal ka socday labada dhinac.